AMAVA ENGQONDI 6 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
AMAVA ENGQONDI 6AMAVA ENGQ ... 6
61Nabu obunye ububi endibubonileyo apha phantsi kwelanga, yaye buthe zinzi phezu kwabantu: 2nditsho into yokuba umntu anikwe ubutyebi nguThixo, aze abe ngumfo omi kakuhle nohlonelwayo, ade angasweli nto ayinqwenelayo, kambe ke uThixo angamniki ithuba lokuzixhamla, ndaweni yaloo nto kuvele owasemzini azixhamle ezo zinto. Ewe, ngamampunge le nto; iyimeko ebuhlungu.
3Umntu noba anganekhulu labantwana, aphile imihla emininzi, phofu angabuxhamli ubumnandi bobomi, angènzelwa umngcwabo onguwo, mna ndithi akunani kwaumntwana ovele engasekho kunaye. 4Kaloku ukuzalwa akumphathelanga nto loo mntwana, usuke aduke ebumnyameni, negama lakhe ligutyungelwe bubumnyama. 5Nakuba lo mntwana engazange walibona ilanga, futhi engazange wazi nto, kodwa ke yena ukufumene ukuphumla kunaloo mntu. 6Ewe, umdlula kude lee umntu ongaxhamlanga luyolo ebomini, noba angade aphile iwaka eliphindwe kabini leminyaka. Andithi na kaloku bonke baya ndaweni-nye?
7Kuyo yonke imizabalazo yakhe umntu usebenzela emlonyeni,
kodwa akaze anele.
8Umntu osisilumko usigqitha ngani isityhakala?
Kulinceda ntoni ihlwempu ukuyazi indlela yokuziphatha phakathi kwabantu?
9Masanele zezo zinto sinazo
endaweni yokuzikhathaza ngokunqwenela le naleya.
Hayi bo, ngamampunge lawo, nqwa nokusukelana nomoya!
10Yonke into ekhoyo sekukudala ithiywe igama layo,
nento ayiyo umntu selisaziwa kakade;
umntu akanako ukumelana nalowo womeleleyo kunaye.
11Okukhona intetho iba nde kokukhona iye ilambatha intsingiselo yayo,
ize ke incede bani loo nto?
12Umntu angayazi njani eyona nto imfaneleyo umntu kobu bomi bufutshane buphuthe kangaka? Ewe, obu bomi buthi phinzi njengesithunzi. Ngubani onokumxelela into eya kwenzeka apha phantsi kwelanga akuba engasekho yena?